FXCC Nzuzo Nzuzo | Otu anyi si eji ozi anyi nwere ike ichikota
Home / amụma nzuzo
Ụkpụrụ Nzuzo FXCC
2. MGBE ECHICHE NDỊ MERE
3. Nchịkọta nke ozi mmadụ
4. KWUKWU NDỊ NA-EME IHE NDỊ GỊ NA-EME
1. Ọrụ nke nkwekọrịta
2. Ịkwado ụgwọ ọrụ iwu
3. Maka nzube nke ichebe ihe ndị ziri ezi
4. Maka ebumnuche azụmahịa ụlọ na idebe ndekọ
5. Maka nkwupụta iwu
6. Maka Ebumnuche Marketing
7. Iji nyere anyị aka imelite ngwaahịa na ọrụ anyị
5. Nyochaa ihe ọmụma gị
6. MGBE Ị GA-ECHEDỤ ỤDỌ
7. OTÚ OTÚ ANYỊ NA-EME IHE Ị GA-EME
8. Ikike gị gbasara ihe ọmụma gị
9. Ọ BỤGHỊ OZI EKWERE EKWERE
10. Oge agafe oge
11. KAMA ANYỊ NA-ECHI IHE IKE
12. ANYỊ BỤ ỤLỌ BỤ ANYỊ
Central Clearing Ltd (nke bụ "Company" ma ọ bụ "anyị" ma ọ bụ "FXCC" ma ọ bụ "anyị"). Nzuzo Nzuzo a na-akọwa ụzọ FXCC nakọtara iji ma jikwa ozi nkeonwe ya n'aka ndị ahịa ya na ndị ahịa. FXCC gbara mbọ ichebe nzuzo gị. Site na ịmepụta akaụntụ ahịa na FXCC onye ahịa na-enye nkwenye na nchịkọta dị otú ahụ, nhazi, nchekwa na iji ozi nkeonwe sitere n'aka FXCC dị ka akọwapụtara n'okpuru.
Ọ bụ iwu Ụlọ ọrụ ahụ ịkwanyere nzuzo nke ozi na nzuzo nke ndị mmadụ n'otu n'otu.
Nzuzo Nzuzo a bu iji nye gi ozi gbasara otu anyi si achota ma tinye data nkeonwe gi, tinyere data obula i nwere ike inye site na weebụsaịtị anyi mgbe ị debanyere aka na weebụsaịtị anyi.
Ọ dị mkpa ka ị gụọ nke a Nzuzo Nzuzo na nkwupụta nzuzo ọ bụla ma ọ bụ nhazi ozi nhazi ọ bụla anyị nwere ike inye n'oge ụfọdụ mgbe anyị na-achịkọta ma ọ bụ nhazi data gbasara gị ka i wee mara nke ọma otu na ihe mere anyị ji eji data gị . Ụkpụrụ a na-agbakwunye atumatu ndị ọzọ, ọ bụghịkwa iji kpochapụ ha.
Na FXCC, anyị ghọtara mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe nzuzo nke ozi nke onye ahịa anyị ma na-etinye aka n'ịhụ nchebe nke ozi ọ bụla ndị ahịa anyị nyere site na ebe nrụọrụ weebụ a.
FXCC A ga-enyocha Nkwupụta Nzuzo site n'oge ruo n'oge iji tụlee iwu ọhụrụ na teknụzụ, mgbanwe na arụmọrụ na omume anyị na ijide n'aka na ọ ka dị mma maka gburugburu ebe obibi. Ozi ọ bụla anyị nwere ga-achịkwa site na Nkwupụta Nzuzo dị ugbu a. A ga-ebudata Nzuzo Nzuzo ahụ na ebe nrụọrụ weebụ FXCC. Na nke a, ndị ahịa ugbu a kwetara ịnakwere ntinye ederede Nzuzo Nzuzo na ntanetị dịka ọkwa nke FXCC maka ndị ahịa ya. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime mgbanwe ndị ahụ bụ nke ihe onwunwe dị mkpa mgbe ahụ anyị ga-agwa gị site na ozi-e ma ọ bụ site na ọkwa na ibe obibi. Ọ bụla arụmụka banyere FXCC Amụma Nzuzo dị n'okpuru ọkwa a na Agreement Client. FXCC na-agba ndị ahịa ya ume ka ha nyochaa Nzuzo Nzuzo a n'otu oge ka ha mara mgbe niile ihe ọmụma FXCC na-anakọta, otu o si eji ya na onye ọ ga-egosipụta ya, dịka atụmatụ nke usoro a.
Iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ ego na nke ọma, mgbe ị na-edebanye aha iji debanye aha ma ọ bụ karịa ọrụ anyị, anyị ga-ajụ gị maka ozi nkeonwe. FXCC nwere ikike na ọrụ site na ọrụ azụmahịa a rụrụ, iji chọpụta nyochaa nke data ndị dị na ọdụ data site na mgbe ụfọdụ na-arịọ gị maka data emelitere ma ọ bụ maka nkwenye nke ziri ezi nke ahụ e kwuru na mbụ.
Ụdị ozi nkeonwe anyị nwere ike ịnakọta nwere ike ịgụnye (ma ọ bụghị nanị na):
Aha njirimara nke onye ahịa.
Ebe amụrụ onye.
Ụlọ na adreesị ọrụ.
Ụlọ na nọmba ekwentị.
Ekwentị / nọmba ekwentị.
Adreesị ozi ịntanetị.
Nọmba paspọt / ma ọ bụ nọmba ID.
Gọọmentị nyere foto ID na mbinye aka.
Ozi banyere ọnọdụ ọrụ na ego
Ozi gbasara enwere azụ ahịa na mbụ na nnweta ihe ize ndụ.
Ozi gbasara agụmakwụkwọ na ọrụ
Ụtụ isi na ID ID.
Ihe ndekọ ego na-agụnye [akaụntụ ụlọ akụ na nkọwa ego ịkwụ ụgwọ].
Data mmekọrịta gụnyere [nkọwa banyere ịkwụ ụgwọ na na site n'aka gị].
Usoro ntanetị gụnyere adreesị weebụ (IP), data nbanye gị, ụdị ihe nchọgharị na mbipute, ọnọdụ mpaghara oge na ebe, ụdị nkwụnye ihe nchọgharị na nsụgharị, sistemụ arụmọrụ na ikpo okwu na nkà na ụzụ ndị ọzọ na ngwaọrụ ị na-eji iji nweta ebe nrụọrụ weebụ a. ].
Data profaịlụ gụnyere [aha njirimara na paswọọdụ gị, ịzụrụ ma ọ bụ iwu nyere gị, ọdịmma gị, mmasị, nzaghachi na nzaghachi nyocha].
Njikwa ejiji gụnyere [ozi gbasara otu i si eji weebụsaịtị, ngwaahịa na ọrụ anyị].
Ozi Marketing na Communications gụnyere (mmasị gị na inweta ahịa site na anyị na ndị ọzọ na nkwupụta nkwurịta okwu gị).
Anyị na-anakọta, jiri ma kesaa Data nchịkọta dị ka data ndekọ ma ọ bụ data igwe mmadụ maka nzube ọ bụla. Enwere ike ịnweta Data site na data nkeonwe gi ma anaghi ele ya anya na iwu dika data a adighi egosiputa gi. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ikpokọta Njikwa Ịntanetị iji gbakọọ pasent nke ndị ọrụ ịnweta otu njirimara website. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ejikọta ma ọ bụ jikọọ Data aggregated na data nkeonwe gị ka ọ nwee ike ịmata gị ma ọ bụ n'ụzọ nwerè, anyị na-emeso data jikọtara dị ka data nkeonwe nke a ga - eji mee ihe dị ka ọkwa nzuzo a.
Anyị anaghị anakọta Ọdịnaya Special nke Personal Data gbasara gị (nke a na-agụnye nkọwa gbasara agbụrụ gị ma ọ bụ agbụrụ gị, nkwenkwe okpukpe ma ọ bụ nkà mmụta sayensị, ndụ nwoke na nwanyị, inwe mmekọahụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu ọrụ mgbasa ozi, ozi gbasara ahụike gị na mkpụrụ ndụ ihe nketa na data biometric) .
Anyị nwekwara ike ikpokọta ụfọdụ ozi banyere ojiji nke ọrụ anyị. Nke a nwere ike ịgụnye ozi nke ị ga - amata na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị dị ka oge ị banyere, ogo gị nke ọrụ, ụdị data, usoro na akụkọ ị nweta, ebe ị na - abanye, ogologo oge na ihe ndị ọzọ yiri data. Enwere ike ịnweta ozi anakọtara site n'aka ndị ọzọ, dị ka ndị ọchịchị, ụlọ ọrụ ndị kpọbatara gị na FXCC, ụlọ ọrụ nhazi kaadị, nakwa dịka ọkwa dị n'ihu ọha na-enye anyị ikikere ịhazi.
A na-edekọ kọntaktị kọmputa gị na / ma ọ bụ na telivishọn na ọ bụ naanị nke FXCC ma bụrụ ihe akaebe nke nkwurịta okwu n'etiti anyị.
Ị nwere nhọrọ ịnye ọ bụla ma ọ bụ ozi nkeonwe ọ bụla achọrọ. Otú ọ dị, enweghị ihe ọmụma nwere ike ime ka anyị enweghị ike imeghe ma ọ bụ nọgide na akaụntụ gị na / ma ọ bụ iji nye gị ọrụ anyị
Anyị na-achịkọta usoro ma jikwaa ozi nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ọrụ anyị na gị na iji kwenye na ọrụ iwu anyị.
N'okpuru bụ ebumnuche nke akọwapụtara ozi gbasara gị:
Anyị na-ahazi data gị iji nye gị ọrụ na ngwaahịa anyị, na iji nwee ike mezue usoro ịnakwere anyị iji banye na mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị. Iji mezuo onye ahịa anyị na ịnweta ịkwesịrị iji chọpụta njirimara gị, mee onye ahịa ya ka ọ dị mkpa dịka ọ bụla dịịrị iwu, ọ dịkwa anyị mkpa iji nkọwa zuru ezu iji jikwaa ego azụmahịa gị na FXCC.
Ọtụtụ ọrụ iwu kwadoro na iwu ndị dị mkpa nke anyị na-agbaso, yana iwu iwu, dịka iwu iwu na-akpata laundering, iwu ọrụ ego, iwu ụlọ ọrụ, iwu nzuzo na iwu ụtụ isi. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ndị isi na-ahụ maka nlekọta ndị iwu na iwu ha metụtara anyị, bụ nke na-eweta ọrụ nchịkọta data nke onwe onye dị mkpa iji chekwaa kaadị akwụmụgwọ, nkwụnye ego, nyocha njirimara na ikwenye na iwu ụlọikpe.
FXCC na-etinye data nkeonwe iji chebe ihe ndị ziri ezi na anyị ma ọ bụ site na ndị ọzọ, ebe mmasị dị mma bụ mgbe anyị nwere azụmahịa ma ọ bụ ihe azụmahịa iji jiri ozi gị. Ka o sina dị, ọ gaghị aga n'ihu gị na ihe kachasị mma maka gị. Ihe omuma nke oru nhazi ndia bu:
Ịga n'ihu ikpe ụlọikpe na ịkwadebe nzọrọ anyị na usoro ikpe akwụkwọ;
pụtara na usoro anyị na-amalite iji nye Ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ IT na nchekwa usoro, igbochi mpụ, mbinye ego, nnyefe nkwenye na mgbochi njehie;
usoro iji jikwaa azụmaahịa na maka mmepụta ngwaahịa na ọrụ mmepe;
njikwa ihe ize ndụ.
Enwere ike ịchọrọ ịhazi data nkeonwe gị maka azụmahịa ụlọ na idebe ihe ndekọ, nke dị na mmasị onwe anyị ma achọọ ka anyị nwee ike ịgbaso iwu iwu anyị. Anyị ga-edebekwa ihe ndekọ iji jide n'aka na ị na-agbaso ụgwọ ọrụ gị dịka nkwekọrịta nke na-achịkwa mmekọrịta anyị na gị.
Mgbe ụfọdụ, iwu chọrọ ka anyị nye gị ndụmọdụ banyere ụfọdụ mgbanwe na ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ iwu. Anyị nwere ike ịkọrọ gị gbasara mgbanwe ndị metụtara ngwaahịa na ọrụ anyị, ya mere, anyị ga-edozi ozi gbasara gị iji zitere gị ọkwa ozi iwu. Ị ga-anọgide na-enweta ozi a ọbụna ma ọ bụrụ na ị họrọ ịghara ịnweta ozi ahịa ziri ezi n'aka anyị.
Anyị nwere ike iji data gị maka nyocha na nyocha analysis, na akụkọ ịzụ ahịa gị iji wepụta nyocha ọ bụla, akụkọ, mkpọsa nke nwere ike ịmasị gị na adreesị ozi-e gị edebara aha. Biko mara na ị nwere ikike ịgbanwere nhọrọ gị ma ọ bụrụ na ị chọghị ịnweta nkwurịta okwu ndị a ogologo oge.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka anyị jiri ozi nkeonwe gị n'ụzọ dị otú a, biko ziga ozi email na support@fxcc.com na-ajụ ka a ghara ịkpọtụrụ gị maka nzube ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-edebanye aha n'ịntanetị, ịnwere ike ịbanye na gị Onye ọrụ ahịa Hub ma megharịa mmasị gị ọkwa n'oge ọ bụla.
Anyị nwere ike iji ozi nkeonwe ị nyere iji hụ na ndị kachasị elu mgbe ị na-enye ngwaahịa na ọrụ anyị.
Ebumnuche bụ isi anyị jiri ozi nkeonwe gị bụ iji mee ka anyị ghọta ihe mgbaru ọsọ ego gị ma hụ na ọrụ ndị dị mkpa kwesịrị ekwesị na profaịlụ gị. Ọzọkwa, ozi a na-enyere FXCC aka inye ọrụ dị mma. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iziga gị ahịa (gụnyere ma ọ bụghị naanị na SMS ma ọ bụ ozi email maka ịlele, oku amaokwu, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ) site n'oge ruo n'oge anyị chere ga-abara gị uru, anyị maara mkpa ọ dị ịkwanyere ùgwù nzuzo gị. Ọ gwụla ma a gwara gị ma ọ bụghị, a na-eji ozi nkeonwe anyị iji guzosie ike na ijikwa akaụntụ gị, nyochaa mkpa gị, ịkwalite ọrụ ahịa na ngwaahịa ma nye gị ozi ma ọ bụ ohere ndị anyị kwenyere nwere ike ịdị gị mkpa.
FXCC agaghị egosiputa ozi nkeonwe gị n'enweghị nkwenye gị, na-adabere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ metụtara na mgbochi ụfọdụ na ozi dị nro, nke a pụtara na ị nwere ike ịkọwa ozi nkeonwe:
Ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị ọkachamara ọkachamara na FXCC ndị ejirila nkwekọrịta nye anyị nhazi, ego, mkpuchi, nnyocha ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Na-ebute ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ anyị na-enwe mmekọrịta mmekọrịta (onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịbụ n'ime ma ọ bụ n'èzí European Economic Area)
Ndị na-enye onyinye, ụlọ ikpe, ikpe na ndị isi iwu dị ka ndị kwadoro ma ọ bụ ndị iwu kwadoro
Nkọwapụta ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchịkọta akụkọ, ndị ọrụ na-eweta nkwenye nke atọ, njedebe aghụghọ, mgbochi ego laundering, njirimara ma ọ bụ iji nlezianya nyochaa onye ahịa
Onye ọ bụla nyere ikike site n'onye, ​​dị ka onye ahụ kwuru ma ọ bụ nkwekọrịta ahụ
Nye Onye Mgbakwunye nke Ụlọ Ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla dị n'otu ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na iwu chọrọ iwu dị otú a ma ọ bụ ikike iwu ọ bụla, a ga-eme ya ka FXCC mezuo ọrụ iwu ọ bụla, chebe onwe ya pụọ ​​na ịghọ aghụghọ, ma jigide nkwekọrịta ọrụ. Ọ bụrụ na a chọrọ ọkwa dị otú ahụ, a ga-eme ya na nkwụsị 'mkpa-na-maara', ọ gwụla ma ọ bụrụ na ndị isi na-enye ntụziaka. N'ozuzu, anyị na-achọ ka òtù ndị dị n'okpuru FXCC na-ejikwa ma ọ bụ nweta ozi nkeonwe dịka ndị na-enye ọrụ na FXCC kwetara na nzuzo nke ozi a, na-ebido ịkwanyere ikike nke onye ọ bụla ikike na nzuzo ma soro ụkpụrụ Iwu Nchedo na iwu a.
N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ibufe ozi na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ anyị iwu kwadoro ma ọ bụ ma ọ bụrụ na enyere anyị ikike n'okpuru ọrụ nkwekọrịta na ọrụ iwu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na enyere anyị nkwenye gị.
Anyị nwekwara ike igosipụta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ọrụ igosipụta ma ọ bụ kesaa data nkeonwe gị iji mee ihe ọ bụla metụtara iwu, ma ọ bụ iji mezuo ma ọ bụ tinye Usoro na Usoro Ọnọdụ anyị.
Site na ịnye ozi gị, ị kwenyere iji FXCC mee ihe ahụ, dị ka edepụtara na iwu a. Site na ịnweta na iji nke a ị na-ekweta na ị gụọla, ghọtara na kwenye na iwu nzuzo a. Anyị debere ikike ịgbanwe iwu nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge ma ga-emelite ibe a n'ụzọ dabara adaba. Biko nyochaa iwu anyị mgbe ọ bụla o kwere mee - n 'ị nọgidere jiri saịtị ahụ mee ihe ga - egosi na ị kwenyere na mgbanwe ọ bụla dị otú ahụ.
Na saịtị ahụ, site n'oge ruo n'oge, nwere njikọ na na weebụsaịtị nke netwọk mmekọrịta na ndị mmekọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere njikọ nke weebụsaịtị ndị a, biko mara na weebụsaịtị ndị a nwere ike ịnwe ụkpụrụ nzuzo onwe ha na na anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ maka iwu ndị a. Biko lelee atumatu ndị a tupu ị nyefee data nkeonwe na weebụsaịtị ndị a.
Ị nwere ike ịhapụ nkwenye gị n'oge ọ bụla, mana ọ bụla nhazi nke data onwe onye tupu enwetaghị nkwụsị gị agaghị emetụta ya.
FXCC ga-edebe data nkeonwe gị ruo ogologo oge anyị na gị nwere mmekọrịta azụmahịa.
Site na iwu anyị chọrọ ka anyị zaa ajụjụ ọ bụla n'ime data 30, ọ gwụla ma ụdị arịrịọ ahụ chọrọ oge maka nyocha na nyocha. Ikike ndị nwere ike ịnweta gị gbasara ozi gbasara anyị gbasara gị bụ ndị edepụtara n'okpuru:
Nata nweta data nkeonwe gị. Nke a na-enyere gị aka ịnweta otu data nkeonwe anyị nwere banyere gị.
Rịọ nyocha / ndozi nke data onwe anyị anyị nwere banyere gị. Nke a na-enyere gị aka ịhazigharịa data anyị ezughị ezu ma ọ bụ na-ezighị ezi anyị nwere banyere gị. Anyị nwere ike ịrịọ ozi ndị ọzọ na akwụkwọ achọrọ iji gosipụta mkpa maka mgbanwe mgbanwe a chọrọ.
Arịrịọ arịrịọ maka ozi gbasara gị. Ị nwere ike ịjụ anyị ka ihichapụ data gị onwe gị, na-egosipụta ikike gị "ka echezọ", ebe ọ dịghị ezi ihe mere anyị ji aga n'ihu ịhazi ya. Ntuziaka a iji kpochapụ data gị onwe gị ga-eme ka mmechi nke akaụntụ gị na njedebe nke mmekọrịta onye ahịa.
Arịrịọ ka 'igbochi' ma ọ bụ gbochie nhazi nke data onwe gị na ọnọdụ ụfọdụ, dịka ma ọ bụrụ na ị kwadoro izi ezi nke ozi nkeonwe ma ọ bụ mee ka anyị na-edozi ya. Ọ gaghị egbochi anyị ịchekwa ozi nkeonwe gị. Anyị ga-agwa gị tupu anyị ekpebie ịghara ikweta na mgbochi ọ bụla a rịọrọ. Ọ bụrụ na anyị egosipụtara ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ, anyị ga-agwa gị banyere mgbochi ọ bụrụ na o kwere omume. Ọ bụrụ na ị jụọ anyị, ọ bụrụ na o kwere omume na iwu kwadoro ime otú ahụ, anyị ga-agwa gị onye anyị kesara ozi gbasara gị ka i wee kpọtụrụ ha ozugbo.
Nwee ikike ịjụ data gị ka ọ na-edozi maka atụmatụ ahịa ahịa. Nke a na-agụnye ịba uru dịka ọ na-emetụta ahịa ahịa. Ọ bụrụ na ị jụ nhazi maka ebumnuche ahịa efu, mgbe ahụ, anyị ga-akwụsị nhazi nke data onwe gị maka nzube ndị ahụ.
Ihe ọ bụla, n'oge ọ bụla, na mkpebi ọ bụla anyị nwere ike ịnweta na-adabere na nhazi arụmọrụ (tinyere nyocha). Nkọwapụta gụnyere iji nkà na ụzụ na-enyere anyị aka ime mkpebi na-akpaghị aka, dabere na data nkeonwe gị na anyị na-anakọta n'aka gị ma ọ bụ site na ndị ọzọ.
Ị gaghị akwụ ụgwọ iji nweta data nkeonwe gị (maọbụ iji gosipụta ikike ọ bụla). Otú ọ dị, anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ego kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ịrịọ gị bụ ihe doro anya, ihe ugboro ugboro ma ọ bụ oke. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike jụ ịjụ arịrịọ gị n'ọnọdụ ndị a.
Anyị na-agbalị ịzaghachi arịrịọ niile ziri ezi n'ime otu ọnwa. Mgbe ụfọdụ ọ ga - ewe anyị ogologo oge karịa otu ọnwa ma ọ bụrụ na arịrịọ gị dị mgbagwoju anya ma ọ bụ na ịmeela ọtụtụ arịrịọ. N'okwu a, anyị ga-agwa gị ma mee ka ị dị ọhụrụ.
Anyị na-agbalịsi ike iji kpuchie nchedo ozi e debere anyị, ma n'oge nnyefe ma ozugbo anyị natara ya. Anyị na-edebe nlekọta kwesịrị ekwesị, teknụzụ na nchebe anụ ahụ iji chebe Data Onweonụ megide mbibi mberede ma ọ bụ iwu akwadoghị, ọnwụ mberede, mgbanwe na-enweghị ikike, nkwupụta na-enweghị ikike, ohere, na ụdị ọ bụla ọzọ na-akwadoghị nke Personal Data na anyị. Nke a na-agụnye, dịka ọmụmaatụ, firewalls, nchebe paswọọdụ na njikwa na nyocha njikwa ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ọ dịghị usoro nke ịnyefe Internet, ma ọ bụ usoro nke nchekwa kọmputa, bụ 100% echekwa. Anyị enweghị ike ịme ma ọ bụ mee ka nchebe nke ozi ọ bụla ị na-ezitere anyị na ị na-eme ya na ihe ize ndụ gị. Anyị enweghị ike ikwe nkwa na enweghi ike ịnweta, kọwaa, gbanwee, ma ọ bụ kpochapụ ihe ọmụma dị otú ahụ site n'imebi nke ọ bụla n'ime ahụ ike anyị, ọrụaka, ma ọ bụ njikwa. Ọ bụrụ na ị kwenyere na e meghaala Personal Data gị, biko kpọtụrụ anyị.
FXCC nwere ike ịchekwa ozi gị na ọdụ data ya maka ịza ajụjụ iji zaa ajụjụ ma ọ bụ dozie nsogbu, nye ọrụ dị mma na ọrụ ọhụrụ na izute ihe ọ bụla chọrọ ijide data. Nke a pụtara na anyị nwere ike ijigide ozi gị mgbe ị kwụsịrị iji saịtị ma ọ bụ ọrụ anyị ma ọ bụ soro ya na-akpakọrịta.
Kuki bụ obere ederede echekwara na kọmputa gị iji nyere anyị aka ịchọpụta ụdị nchọgharị na ntọala ị na-eji, ebe ị nọ na weebụsaịtị, mgbe ị laghachiri na ebe nrụọrụ weebụ, ebe ị si bịa, na iji hụ na ozi gị bụ echekwa. Ebumnuche nke ozi a bụ iji nye gị ahụmịhe dị irè ma dị irè na saịtị FXCC, gụnyere ịmepụta ibe weebụ dịka mkpa gị ma ọ bụ mmasị gị.
FXCC nwekwara ike iji ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ mpụga onwe ha iji soro okporo ụzọ na ojiji na weebụsaịtị. A na-eji kuki ọtụtụ ugboro na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na ịntanetị ma ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na otu esi kuki kuki site na ịgbanwere mmasị na nhọrọ gị n'ime ihe nchọgharị gị. Ị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnweta akụkụ ụfọdụ nke www.fxcc.com ma ọ bụrụ na ị họrọ ịhapụ nkwenye kuki na ihe nchọgharị gị, karịsịa akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ. Ya mere, anyị na-akwado gị ka ị kwenye ikuku iji rite uru site na ọrụ niile na weebụsaịtị.
I nwere ikike ikpebi ma ị ga-anabata ma ọ bụ jụ kuki site na ịtọ ma ọ bụ na-agbanwe ihe nchọgharị weebụ gị iji kweta ma ọ bụ kpochapụ kuki. Ọ bụrụ na ị họrọ ịjụ kuki, ịnwere ike iji website anyị ebe ọ bụ na ị nwere ike ịnweta ụfọdụ ọrụ na ebe nke weebụsaịtị anyị nwere ike ịdọrọ. Dị ka ụzọ ị nwere ike isi kpochapụ kuki site na njikwa ihe nchọgharị weebụ gị site na nchọgharị na-nchọgharị, ị ga-aga na enyemaka ihe nchọgharị gị maka ozi ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji saịtị weebụ a n'enweghị na-agbanwe agbanwe ntọala kuki nke ihe nchọgharị weebụ gị mgbe ahụ, ị ​​na-akwado nkwenye nke kuki anyị
Iji mụtakwuo maka kuki na otu esi ejikwa ha site na ihe nchọgharị / ngwaọrụ gị biko gaa www.aboutcookies.org
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ anyị na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla banyere iwu nzuzo anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na ozi-e, adreesị ozi-e, ekwentị na faksị ma ọ bụ jiri ebe nkata anyị na-anọchite anya ndị ọrụ ahịa nke IM.
Ụlọ Iwu Iwu, Kumul Highway,